Soosaarayaasha Eey & Jeebka Leashka | Warshadda Eeyga Shiinaha
1. Kiiska Dheeraadka ah ee Eyga ee 'Extra Bungee Reractable Dog Leash' kiisa waxaa laga sameeyay tayo sare leh oo ah ABS + TPR qalab, kana hortagaya dildilaaca kiiska si shil ah u dhaca.
Waxaan sidoo kale ku darnaa xadhig bungee dheeraad ah oo loogu talagalay xadhigga eyga dib looga noqon karo. Naqshadda bungee ee gaarka ah waxay ka caawineysaa inay soo nuugto naxdinta dhaqaaqa degdegga ah markii loo adeegsado eeyaha firfircoon iyo kuwa firfircoon. marka eeygaagu si lama filaan ah u duulo, ma heli doontid shoog lafa-jabis ah, taas beddelkeedana, saameynta bungee ee xarigga laastikada ah ayaa yareyn doonta saameynta gacanta iyo garabka.
3. Qaybta ugu muhiimsan ee xarig la iska celin karo waa gu '. Extra Bungee Laydhka Eyga oo leh dhaqdhaqaaq gu 'xoog leh si habsami leh uga noqoshada, illaa 50,000 jeer. Waxay ku habboon tahay eey weyn oo xoog badan, nooc dhexdhexaad ah iyo noocyo yaryar.
4.Extra Bungee Lahaanshaha Eyga Leash sidoo kale wuxuu leeyahay 360° Xadhigga xayawaanka aan xatooyada lahayn ee xorriyadda u siinaya xayawaankaaga si ay u wareegaan oo aanad naftaada ugu duubin hoggaanka.
Xadhig Ey Looga Leexan Karo
Waxay kaa caawineysaa inaad sifiican u xajisato xajin xoog leh, xitaa eeyaha waaweyn ee jiidaya isla markaana socda.
Gu'ga culus ee gu'ga ah ee xadhiggan eeyaha ee laga cawdo ayaa si fudud ula qabsan kara eeyaha firfircoon ilaa 110 rodol.
1. Kiiska culus ee loo yaqaan 'Eug Leash Dog Leash' kiiskiisa wuxuu ka sameysan yahay shey qaali ah ABS + TPR, wuxuu ka hortagayaa dildilaaca kiiska shil dhaca.
Xadhiggan dib u noqoshada leh wuxuu ku qaadan karaa cajalad naylo ah oo ka tarjumeysa illaa 5M, sidaa darteed waxay noqoneysaa badbaado badan marka aad eyga u shaqeyneyso habeenkii.
3.Hubka culus ee loo yaqaan 'Eug Leaks Eug Leash' oo leh dhaqdhaqaaq gu 'xoog leh oo si habsami leh uga noqoshada, illaa 50,000 jeer. Waxay ku habboon tahay eyga weyn ee awoodda badan, eeyaha dhexdhexaadka ah iyo kuwa yaryar.
4.Hubka culus ee loo yaqaan 'Eug Leash' ee loo yaqaan 'ey' sidoo kale wuxuu leeyahay 360° Xadhigga xayawaanka aan lahayn tangle wuxuu xoriyad dheeraad ah siinayaa xayawaankaaga si ay u wareegaan oo ma heli doontid naftaada inaad ku duudduubto hoggaanka.
Xadhigga jumlada eeyaha laga celin karo waxay ka samaysan tahay xadhig nylon ah oo la xoojiyay kaas oo qaadi kara jiidasho xoog leh eeyaha ama bisadaha ilaa 44lbs oo miisaan ah.
Xadhigga jumlada eeyaha laga celin karo waxay gaareysaa ilaa 3m, waxay qaadi kartaa jiidista ilaa 110lbs.
Xadhiggan jumlada ah ee laga celin karo eeygu wuxuu leeyahay naqshad gacan qabsi ergonomic ah, waxay u oggolaaneysaa socod dheer oo raaxo leh, mana jiro wax walwal ah oo ku saabsan dhaawaca gacantaada. Ka sokow, waa''s halkii aad ka fudud tahay oo aan sibiibix ahayn, markaa si dhib leh uma dareemaysid daal ama gubasho kadib socod dheer.
1.Waxyaabaha loo yaqaan 'Leashka' ee loo yaqaan 'Leash' oo loo yaqaan 'Lash' ee loogu talagalay eeyaha yaryar waa jawi saaxiibtinimo leh, aan sun lahayn, oo aan ur lahayn. Xadhiggu wuxuu bixiyaa nolol dheer oo la isticmaalo, guga-dhamaadka sare ee adagna wuxuu ka dhigayaa xadhiggu inuu kordhiyo oo si habsami leh u soo kabto.
Xadhigga ABS ee waara wuxuu leeyahay xajin ergonomic ah iyo xarago ka hortagga siibashada, waa mid aad u raaxo badan oo ku habboon calaacasha gacantaada, oo ku habboon gacantaada sida gacmo gashi. Naqshadeynta ka hortagga-silbashada ee xarigga la iska celin karo eeyaha yaryar ayaa xaqiijineysa nabadgelyada, oo marwalba waad xakameyneysaa waxyaabaha. Qalab bir ah oo adag oo bir ah oo adag ayaa si aamin ah ugu dhegsan qoorta xayawaanka ama suunka.